WiFi Tooska ah ee Android: Waa maxay iyo sida loo qaabeeyo | Androidsis
WiFi Toosan: waa maxay iyo sidee loogu qaabeeyaa Android
Eder Ferreno | | Khiyaamada Android, Tababarada
WiFi Direct waa wax muddo dheer ku soo jiray Android, in kasta oo adeegsadayaal badani weli ay tahay wax weyn oo aan la garanayn. Intooda badani sifiican uma garanayaan waxa shaqadan ama ikhtiyaarkan loo yaqaan, ama waxa aan ku qaban karno. Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tageynaa dhammaan macluumaadka aan u baahan nahay inaan ka ogaanno arrintan.
Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato waxa loo yaqaan 'WiFi Direct', marka lagu daro habka aad ugu hagaajiso taleefankaaga Android. Tallaabooyinka arrintan la xiriira waa kuwo fudud, laakiin waa muhiim in la ogaado waxa laga yeelayo kiiskan. Waxaan hoosta kaaga sheegi doonaa wax kasta oo ay tahay in la ogaado.
1 Waa maxay WiFi Direct maxaase loogu talagalay
2 Sida loogu rakibo Android
Waa maxay WiFi Direct maxaase loogu talagalay
WiFi Direct waa shahaado ka qaadista Wadajirka WiFi, oo ay xubno ka yihiin in kabadan 600 oo xubnood oo adduunka ah. Noocyo iyo aalado badan ayaa qayb ka ah, ururkan, sidaa darteed way ku habboon yihiin shahaadadan. Iyaga waxaa ka mid ah waxaan heleynaa taleefannada Android. Waa wax jira ilaa 2010 ee taleefannada nidaamka hawlgalka.
WiFi Direct waxaa loo tixgeliyaa jiilka labaad ee WiFi, si loo fududeeyo fahamka fikradan. Waxay u suurta gelineysaa aaladaha iswaafajiya, ee aan laheyn xiriirkooda internetka, xiriir la sameyso aalado kale inay sameeyaan (ka fikir modem ama router). Sidaa darteed, waa suurtagal in la abuuro shabakad dhowr qalab ah.
Waqtiga ka dib, shaqooyinka cusub ayaa sidoo kale lagu darayaa WiFi Direct. Tan iyo hada wuxuu leeyahay taageero NFC, tusaale ahaan. Xaaladdan oo kale, shaqooyin cusub ayaa lagu soo bandhigayaa noocyada cusub, sida ku dhacday NFC-da ku jirta. Inbadan ayaa imaan doonta waqtiga.
Sida gacanta loogu habeeyo WiFi-ka Android-ka
Waxaa jira hawlo dhowr ah oo la fulin karo mahadsanid WiFi Direct. Marka waa wax xiiso weyn u yeelan kara dadka isticmaala Android. Qaar ka mid ah howlaha aan ugu isticmaali karno taleefankeena gacanta waa:
Kala wareeji faylasha taleefannada (u beddela NFC ama Bluetooth)
Isku xir qalab badan si aad u abuurto shabakad wireless ah
U soo dir multimedia TV-ga (waxay ku habboon tahay Miracast, iyo kuwo kale)
Ka daabac madbacada ku xiran WiFi
Waa wax aan wax badan ka heli karno sidaa darteed. In kasta oo tan awgood, waa inaan ku xirnaa taleefanka. Waxaan ku tuseynaa sida tan ay suurtagal ku tahay hoosta.
Sida loogu rakibo Android
WiFi Direct waa wax aan ka helno wakhti kasta taleefankeena Android. Waxaa lagu soo bandhigay noocyadeedii ugu horreeyay tan iyo Android 4.0 waa wax aan waligiis ka tagin taleefanka. Marka waxaad awoodi doontaa inaad ku isticmaasho taleefankaaga casriga ah dhibaato la'aan. Si loo adeegsado, waa inaan marka hore isku hagaajino. Tallaabooyinku waa sahlan yihiin, in kastoo ay kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran lakabka shakhsi ahaaneed ee taleefanka, sidaad horayba u ogayd. Kuwani waa tallaabooyinka la raacayo:
Dhaqaaq WiFi-gaaga casriga ah
Fur setinka taleefankaaga
Gali qaybta isku xirka ama isku xirka (magaca waa isbedbeddelayaa)
Gali qaybta WiFi
Guji ikhtiyaarka WiFi Tooska ah si aad u dhaqaajiso
Taabo badhanka si aad u bilowdo raadinta qalab u dhigma
Waa maxay WiFi 6? Faa'iidooyin noocee ah ayey leedahay?
Haddii qalab laga helo oo la jaan qaadi kara, Waxaan ku arki doonaa iyaga shaashada taleefankayaga Android markasta. Marka waxaan la dhisi karnaa xiriir iyaga dhibaato la'aan. Haddii loo isticmaalo in lagu xiro aalado badan, markaa waxay noqon doontaa suurtagal in la abuuro shabakad, sida ujeedku yahay adeegsadayaal badan oo arrintan la xiriira.
Sida aad u jeeddo, qaabeynta waa mid aad u fudud kiiskan. Marka waad ku isticmaali kartaa WiFi Tooska taleefanka markasta oo aad rabto oo aad sidan ugu xirto aalado kale oo aad uga faa'iideysato qaar ka mid ah shaqooyinka aan kor ku soo xusnay kiiskan. Aad u fudud in la isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » WiFi Toosan: waa maxay iyo sidee loogu qaabeeyaa Android
Liiska Geekbench ee Samsung Galaxy A70s ayaa soo ifbaxday
Kari oo u adeeg macaamiishaada safarka aad ku qaadan doontid Safarka Macaan - Emily